मेटासिट बोकेर गृहमन्त्री निवासमा पूर्वलडाकु
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते कुलप्रसाद भट्टराई बिहीबार बिहान ९ बजेतिर मन्त्री निवास पुल्चोक पुगे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न गएका उनी मूल गेटमै समातिए । कारण थियो– उनको झोलामा भेटिएको मेटासिट । ... बाँकी अंश»
बंगलादेशमा गोरु तस्करी
२०७५ मङ्सिर १८ मंगलबार, दाङ । पछिल्लो समय दाङबाट गोरु तस्करी गरेर देशबाहिर लैजाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यसअघि सेटिङमा भारतबाट गोरु नेपाल भित्र्याएर तेस्रो मुलुक बंगलादेश लैजाने गरेकोमा अहिले दाङबाट पूर्वी नेपालको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजान थालिएको छ । पछिल्लो समय दाङको देउखुरीमा अप्रत्याशित रुपले गोरुको कारोबार बढेको छ । ... बाँकी अंश»
पूर्वउपराष्ट्रपति झाले कहिले देलान् ६७ हजार एक सय
२०७५ मङ्सिर ११ मंगलबार, काठमाडौं । बेरुजु रकम जम्मा ६७ हजार रुपैयाँ एक सय । बेरुजु गर्ने अधिकारी पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा । फर्स्योटका लागि चार वर्षदेखि लगातार ताकेता । ... बाँकी अंश»
कस्तो विडम्बना ! कमाउन साउदी पुगेकै दिन जेल
२०७५ मङ्सिर ११ मंगलबार, काठमाडौं । बराहक्षेत्र नगरपालिका २ सुनसरीका भुपाल बस्नेतको सकेसम्म स्वदेशमै केहि काम गरौँ भन्ने सोच थियो । सोही सोचले गर्दा उनले पहिलोपटकको वैदेशिक रोजगारी त्यागे पनि । ... बाँकी अंश»
विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम नमुना परीक्षण हुँदै
२०७५ मङ्सिर ७ शुक्रबार, काठमाडौँ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका एक सय विद्यालयमा कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणको रुपमा लागु हुने भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप स्विकृत भएसंगै यसलाई परीक्षणको रुपमा लागु गर्न लागिएको हो । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि हुने ? २१ नेकपा केन्द्रीय सदस्यको प्रश्न
२०७५ मङ्सिर ६ बिहिबार, काठमाडौं । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २१ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर गम्भीर प्रश्न तेस्र्याएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ– ‘प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने ? ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर ४ मंगलबार, काठमाडौं । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र स्वर्गिय राजा वीरेन्द्रले कार्यालय समयपछि विशेष परिस्थितमा राजनितिक र कुटनीतिक भेटघाटका लागि निजी कार्यालयको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नारायणहिटी संग्रहालय अन्तर्गत गणेश हिमाल तर्फका ९ वटा कक्ष खुल्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले सेनामार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘विलासी’ गाडीको सेट नै खरिद गर्ने भएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्ने तयारी छ। ... बाँकी अंश»
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बितेको ५९ वर्ष भयो, बिजुली महसुल अझै बक्यौता
२०७५ कार्तिक २८ बुधबार, काठमाडौं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निधन भएकै छ दशक बितिसक्यो । तर, उनको नाममा बिजुली महसुल तिर्न अझै बाँकी छ– १७ सय रुपैयाँ । काठमाडौं मैतीदेवीमा रहेको महाकविको घर ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाइसकेको छ । त्यहाँ कोही बस्दैन । ... बाँकी अंश»
नेकपाको चियापानमा कांग्रेसको भन्दा चारगुणा बढी खर्च
२०७५ कार्तिक २७ मंगलबार, काठमाडौं । सधैँ सामूहिकता, मितव्ययिता जस्ता नारा घन्काउने कम्युनिष्टहरू काँग्रेस भन्दा बढी भड्किला, महङ्गा र खर्चालु देखिएका छन् । कम्युनिष्टहरू कत्तिको तडकभडक छन् भन्ने कुरा दशैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्वतका अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा भएको खर्चबाट नै प्रष्ट हुन्छ । ... बाँकी अंश»
नेपालमा मोदीलाई मात्रै किन महत्व ? : भारतीय कांग्रेस
२०७५ कार्तिक १९ सोमबार, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस–आई)ले नरेन्द्र मोदीलाई मात्रै महत्व नदिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दलगत हितमा उपयोग गरेकोमा आलोचना गर्दै उसले नेपाल सरकारलाई सचेत रहन भनेको हो। कुटनीतिक उच्चस्रोतका अनुसार कांग्रेस आईले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)लाई नै तोकेर नेपाललाई छुट्टै आग्रह गरेको छ। ... बाँकी अंश»
लोकसेवा सरकारसँग रुष्ट
२०७५ कार्तिक १४ बुधबार, काठमाडौं । आफ्ना परामर्शलाई अनादर गरेको भन्दै लोकसेवा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका अनादरका विषय उल्लेख गर्दै आयोगले भविष्यमा संवेदनशील बन्न अग्रह गरेको हो। ... बाँकी अंश»
ओहो ! पैसाको छेलोखेलो
२०७५ कार्तिक १४ बुधबार, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्जा उठाएर खर्च चलाएको सरकारसँग चालु आवमा भने करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बचत छ । ... बाँकी अंश»
वाह सरकार ! रोजगार हुनेलाई नै बेरोजगार तालिम
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, काठमाडौं । युवा स्वरोजगारका नाममा सरकारले अहिलेसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ तर त्यसको परिणाम भने शून्य देखिएको छ। १८ देखि २५ वर्षका वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई तिनमा अन्र्तनिहित सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०६५ मा गठन गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयमा करोडौं रुपैयाँको अनियमिता भएको पुष्टि भएको छ। ... बाँकी अंश»
सरकारलाई च्यालेन्ज दिँदै विप्लव सार्वजनिक हुँदै
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आगामी मंसिर ८ गते काठमाडौंमा जनसभा गर्दैछ । भूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको आरोप लागेको सो पार्टीले मंसिरमा खुलामञ्चमा जनसभा गर्न लागेको हो । सभामा १ लाख बढी जनतालाई सहभागी गराउने योजना बनाएको नेकपाले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
गढीमाईमा छठघाटले कुटाकुट हुँदा एक दर्जन घाइते, तीन गम्भीर
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, कलैया । नजिकिँदै गरेको छठ पर्वका लागि छठघाट बनाउने बिषयमा विवाद हुँदा यहाँको महागढीमाई नगरपालिकामा स्थानीयबीच झडप भएको छ । ... बाँकी अंश»
छिमेकीकी पत्नीसंग सल्किनेको भयो विजोग
२०७५ कार्तिक १३ मंगलबार, महोत्तरी । छिमेकीको पत्नीसँग अनैतिक यौनसम्बन्ध राखेको आरोपमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका—१ का एक युवालाई गाउँलेले मोसो दलेर गाउँ घुमाएका छन् । ... बाँकी अंश»
तीन महिनामा एक हजार चेक बाउन्स
२०७५ कार्तिक १० शनिबार, काठमाडौं। काठमाडौंमा चेक बाउन्सका घटना अत्याधिक बढेका छन्। पछिल्ला ९० दिनमा महानगरीय प्रहरी परिसरमा चेक बाउन्सका एक हजार १७ उजुरी दर्ता भएका छन्। छोटो समयमा धेरै उजुरी परेका कारण प्रहरीले अधिकांशको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकेको छैन। प्रहरीमा परेका उजुरीमध्ये ७ सय ४१ ‘पेन्डिङ’मा छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ कार्तिक १० शनिबार, इटहरी। गत बुधबार साँझ इटहरी वडा नम्बर १० की एक बालिका घरनजिकै नृत्य (डान्स) सिक्न गइन्। नृत्य सिक्न अरु साथी पनि भेला भइसकेका थिए। दसैंअघिदेखि नै स्थनीय राज क्ल्बले तिहारका लागि नृत्य सिकाउन थालेको थियो। ... बाँकी अंश»
नेपाली सेनाका मेजरसहित १८० सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’
२०७५ कार्तिक ९ शुक्रबार, काठमाडौं । सिपाही भर्नामा सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल्ने अधिकृतसहित करिब दुई सय सैनिक कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । ... बाँकी अंश»